အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ဝါဒ စွဲကိုင်ထားဆဲ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« We could learn more asaHouse Officer than asaMedical Student
မြန်မာမွတ်စလင်မ်များ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ခွင့်မရခြင်းကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထောက်မှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးထံသို့ ပေးစာ »
Tags: All Burma Students' Democratic Front, Asia, Chairman, Myanmar, Organizations, Politics
This entry was posted on March 8, 2012 at 5:28 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
March 8, 2012 at 5:54 am | Reply
Anonymous says: မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ မရတာ ခုလို ကွန်မန်းပေးတဲ့ လူတွေရဲ့ အသိညဏ်လောက်ရှိတဲ့ သူတွေအုပ်ချူပ်နေလို့ပါပဲ…စနေမောင်မောင် ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ကို အနည်းဆုံးး၃ခေါက်လောက်ဖတ်စေချင်ပါတယ်…အကြောင်းအရာကို သဘောက်ပေါက် တဲ့အထိ ဖတ်စေချင်ပါတယ်…ခု…ဖြစ်နေတာက မြန်မာမွတ်ဆလင်ဆိုတဲ့ စာသားလေးကို ဖတ်မိလိုက်တာနဲ့ စာရေးတဲ့ သူကို ရော မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ အားလုံးသော မွတ်ဆလင်တွေကို ရော ၀ါးလုံးရှည်ရှည်နဲ့ သိမ်းကြုံးရိုက်ပြစ်တာကို ကျုပ်စာဖတ်သူ အနေနဲ့ မြင် မိတယ်…ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ငတ်မွတ်နေတာက ဥပဒေနဲ့ ဒီမိုကရေစီပါပဲ…ဒီမိုကရေစီရဘို့ ဆိုတာ ကလည်း ကျူပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတဲ့ လူသားတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တယ်…လူသားတိုင်းကလည်းးဒီမိုကရေစီ ကို လိုလားတယ်…ခု..ရွေးကောက်ပွဲ မှာ NLD က ကြားဖြတ် ၀င်မယ်ဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည် ကို ထောက် ခံတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေ …နိုင်ငံရေးးကဒ် မရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေ က အသဲကြားက မဲတစ်ပြားကို ဘယ်လို ပေးနိုင်မှာလဲ…စစ်အစိုးရ က အဲ့ဒီ နိုင်ငံသားကဒ်မရှိတဲ့ မြန်မာမွတ်ဆလင်တွေရဲ့ အမည်နဲ့ လှိုဝှက်မဲတွေ ယူထားပြီး အနိုင် ရသွားရင် ရော စာဖတ်သူဘာတတ်နိုင်မလဲ….ကျုပ် ပြောချင်တာ ယနေ့ မြန်မာပြည်သည် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံသို့ လမ်းဆက်လျှောက်နေသည်…ထို့ကြောင့် မိမိ ကိုယ့်ကို နိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ အမြင်အာရုံတွေ လမ်းဖွင့် ပြီးးလက်တွဲလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ…
March 4, 2012 3:18 PM Reply